ပုံနှိပ်စက်, ဝန်ထမ်းကတ်ပရင်တာ, အသင်းဝင်ကတ်ပရင်တာ, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း ID ကိုကတ်ပရင်တာ, ဝန်ထမ်း ID ကိုကတ်ပရင်တာ, အသင်းဝင်အရောင် ID ကိုကတ်ပရင်တာ, HiTi CS-200E PVC အဖြူရောင်ကတ်ပရင်တာ, HiTi CS-200E ပလတ်စတစ်ကတ်ပရင်တာ, အရောင် PVC Card ကိုပရင်တာ
 » Card ကိုပရင်တာ
HiTi CS-200E ID ကိုကတ်ပရင်တာ
Card ကိုပရင်တာ CS-200e Card ကိုပရင်တာ, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း ID ကိုကတ်ပရင်တာ, HiTi CS-200E အရောင် ID ကိုကတ်ပရင်တာ, HiTi CS-200E ID ကိုကတ်ပရင်တာ, HiTi CS-200E ကျောင်းသား ID ကိုကတ်ပရင်တာ, အသင်းဝင်ကတ်ပရင်တာ, ဝန်ထမ်းကတ်ပရင်တာ
ပုံစံ: HiTi CS-200E
HiTi CS-200e အရောင် ID ကိုကတ်ပရင်တာ, မော်ကျူး options အမျိုးမျိုးကို, ကဒ်ပုံနှိပ်ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောအသွင်အပြင်.
ပုံနှိပ်ပါနည်းပညာ: ဆိုးဆေးသူတော်ကောင်းတရား (တိုက်ရိုက်-to-ကဒ်)
ပုံနှိပ်ပါ Capability: edge-to-အစွန်းပုံနှိပ်ခြင်း
အပြည့်အဝအရောင် (YMCKO) နှင့်မိုနိုခရုမ်ပုံနှိပ်ခြင်း
ကဒ်အရွယ်အစား: CR-80 ISO7810 (53.98× 85.60cm)
ကဒ်ထူ: 0.25စင်တီမီတာ ~ 1.0cm
ပြသ: LCM (အရည် Crystal ု့ကပ်ရေး)
ပုံနှိပ်ပါမြန်နှုန်း: အပြည့်အဝအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း (YMCKO) အထိ 180 တစ်နာရီကိုကတ်များ
မိုနိုခရုမ်အနက်ရောင်ပုံနှိပ်အထိ 1400 တစ်နာရီကိုကတ်များ
Card ကို Format ကို: Windows ကို 2000 / XP / 2003; mac အတွက်ကားမောင်းသူ
input စွမ်းဆောင်ရည်: 100 ကတ်များ (0.76မီလီမီတာ / 30တထောင်)
output စွမ်းဆောင်ရည်: 50 ကတ်များ (0.76မီလီမီတာ / 30တထောင်)
ထောကျပံ့ OS ကို: Windows ကို 2000, XP ကို,ဗီဇာ,Windows ကို7(32/64-နည်းနည်း)
ကို bundle Software များ: CardDésirée CS
ပရင်တာ Dimension: 197.8မီလီမီတာ(W က) x က 354mm(L ကို) X204n(H ကို)မီလီမီတာ
ပရင်တာ Net ကအလေးချိန်: 4.9ကီလိုဂရမ် / 10.8IBS (ပုံနှိပ်မီဒီယာဖယ်ထုတ်ထား)
operating အခြေအနေ: +15℃ ~ + 32 ℃ (59~ 89,6 ° F ကို),20~ 75% RH အ Non-ငွေ့ရည်ဖွဲ့
ပုံနှိပ်ပါမီဒီယာအပြည့်အဝ：panel ကို YMCKO 400 လိပ် (သာဖဲကြိုး) ,16 တစ်ဦးစက္ဏူထူထဲမှာလိပ်
1/2 panel ကို YMCKO 560 လိပ် (သာဖဲကြိုး) ,16 တစ်ဦးစက္ဏူထူထဲမှာလိပ်
မိုနိုခရုမ်ဗဓေလသစ်က Black 1000 လိပ် (သာဖဲကြိုး) ,16 တစ်ဦးစက္ဏူထူထဲမှာလိပ်
operating Encoding：modules ဆက်သွယ်ပါစမတ် IC chip ကို encoding က module တစ်ခု
ချိတ်ဆက်မှု (RFID) encoding က module တစ်ခု (ISO ကို 14443A & B က, ISO ကို 15693)
သံလိုက်အစင်းကဒ် encoding က module တစ်ခု (ISO7811 မင်္ဂလာပါ-ပူးတွဲ / low-ပူးတွဲ)
သည်အခြား Options ကို & ပစ္စည်းများ: ယေကျတောငျမြား module တစ်ခု
မြင့်မားသောစွမ်းရည် input ကို Hopper တွေလည်း (400 ကတ်များ loader ကို)
Ethernet ကို TCP-IP ကိုကွန်နက်ရှင် module တစ်ခု
roller ပျော်စေ (ဖုန်မှုန့်ဖမ်းဆီးဖယ်ထုတ်ထား)
အရောင်ဖဲကြိုး (YMCKO): 200 စာရွက်များ / အသံအတိုးအကျယ်
Black ကဖဲကြိုး (K သည်): 1000 စာရွက်များ / အသံအတိုးအကျယ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: Multi-function ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကဒ်ပုံနှိပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အ CS-200e အရောင်ကဒ်ပရင်တာ, အမျိုးမျိုး module တစ်ခုရွေးချယ်ရေး, ကဒ်ပုံနှိပ်ခြင်းကပိုရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, သင်ပိုမိုအာကာသကယ်တင်, ဒါကြောင့်သင်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကယ်တင် , အဆိုပါကဒ်ကိုမျက်နှာပြင်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ထောက်ခံပါသည်, သင်ပိုမိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု, ပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အခွင့်အလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့.
wide-range ကို, optional ကို encoding က module တွေ
အလိုလို user interface ကို
wide-range ကို & field upgrade Encoding Options ကို
စမတ် IC chip ကို encoding က module ကိုဆက်သွယ်ပါ
ချိတ်ဆက်မှု (RFID) encoding က module တစ်ခု
သံလိုက်အစင်းကဒ် encoding က module တစ်ခု
ယေကျတောငျမြား module တစ်ခု
Ethernet ချိတ်ဆက် module တစ်ခု
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် HiTi CS-200E ID ကိုကတ်ပရင်တာကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
နောက်တစ်ခု: HiTi CS-200E ကို Double-တဖက်သတ် ID ကိုကတ်ပရင်တာ
HiTi CS-290e အလိုအလျောက်ကို Double-တဖက်သတ် Card ကိုပရင်တာ
Datacard SD160 Single-ဘက်ပလတ်စတစ် ID ကိုကတ်ပရင်တာ
Magicard အန်ဒူရိုလူပျို / ကို Double-တဖက်သတ် Card ကိုပရင်တာ
HiTi CS-200E ကို Double-တဖက်သတ် ID ကိုကတ်ပရင်တာ